Zvatingaita Kuti Tiwane Simba Kubva muBhaibheri | Nharireyomurindi Yekudzidza
SARUDZA MUTAURO Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur Amharic Amis Arabic Arhuaco Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Belorussian Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKalanga (ChekuBotswana) ChiKaren (S'gaw) ChiMin Nan (ChekuTaiwan) ChiNgiemboon ChiPhimbi ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTamil (Chinonyorwa Nearufabheti Yedu) ChiTetun Dili Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chirungu (Liberia) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Edo Efik Emberá (Catío) Emberá (Chamí) Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Gbaya Georgian German Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guambiano Guarani Guianese Creole Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lendu Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Makhuwa-Shirima Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mano Manyawa Mapudungun Marathi Mari Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Meru Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wekuCongo Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuIvory Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicobarese Niuean Norwegian Nsenga (Mozambique) Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Piaroa Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Romania) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Songomeno Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tewe Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yakutsk Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
NYAYA YEKUDZIDZA 11
“Mwari . . . anopa kutsungirira.”—VAR. 15:5.
RWIYO 94 Kuonga Shoko raMwari
1. Vanhu vaJehovha vanogona kusangana nemiedzo yakaita sei?
UNE dambudziko rakaoma rauri kusangana naro here? Zvimwe wakarwadziswa nemumwe munhu wemuungano. (Jak. 3:2) Kana kuti zvimwe vaunoshanda navo kana kuti vekuchikoro vanokuseka nekuti unoshumira Jehovha. (1 Pet. 4:3, 4) Kana kuti vemumhuri vari kuedza kukurambidza kuudza vamwe zvaunotenda kana kupinda misangano. (Mat. 10:35, 36) Kana muedzo ukanyanya kukurwadza, ungaona sekuti zviri nani kurega kushumira Jehovha. Asi pasinei nekuti muedzo wacho wakaita sei, unogona kuva nechivimbo chekuti Jehovha achakupa uchenjeri nesimba kuti ukwanise kuutsungirira.
Tingaitei kana tichida kuziva zvekuita padambudziko ratinenge tichisangana naro?
Usati watanga kuverenga Bhaibheri, kumbira Jehovha kuti akubatsire kunzwisisa zvauri kudzidza (Ona ndima 3)
Zvione uri iwe munhu ari kunyanya kutaurwa munyaya yacho (Ona ndima 4)
Dzamisa pfungwa pane zvauri kuverenga uye kuti zvinoshanda sei kwauri (Ona ndima 5)
4. SHANDISA ZVAUNODZIDZA
Shandisa zvaunodzidza kuti uite zvisarudzo zvakanaka, uwedzere kuva nerugare uye kuti usimbise kutenda kwako (Ona ndima 6)
2. Maererano naVaRoma 15:4, kuverenga Shoko raMwari kunotibatsira sei?
2 Jehovha akaita kuti muBhaibheri munyorwe mienzaniso yevanhu vane chivi vakatsungirira miedzo yakaoma. Akaitirei kuti mienzaniso yevanhu ava inyorwe? Kuti tidzidze kwavari. Izvozvo ndizvo zvakafemerwa muapostora Pauro kuti anyore. (Verenga VaRoma 15:4.) Kuverenga nyaya idzi kunotinyaradza uye kunoita kuti tive netariro. Asi kuti tibatsirwe, hatifaniri kungogumira pakuverenga Bhaibheri. Tinofanira kubvumira Bhaibheri kuti richinje mafungiro edu uye manzwiro edu. Chii chatingaita kana tichida mazano ekukunda dambudziko ratinenge tiinaro? Tinogona kuita zvinhu 4 zvinoti: (1) Kunyengetera, (2) Kufungidzira, (3) Kufungisisa, uye (4) Kushandisa zvatinodzidza. Tichakurukura kuti chimwe nechimwe chezvinhu izvi tingachiita sei. * Tichabva tashandisa nzira iyi yekudzidza kuti tiongorore zvakaitika muupenyu hwaMambo Dhavhidhi uye hwemuapostora Pauro.
3. Usati watanga kuverenga Bhaibheri, unofanira kuitei uye nei uchifanira kudaro?
3 (1) Nyengetera. Usati watanga kuverenga Bhaibheri, kumbira Jehovha kuti akubatsire kuona kuti ungabatsirwa sei nezvaunoverenga. Semuenzaniso, kana uri kutsvaga mazano ekukunda dambudziko, kumbira Jehovha kuti akubatsire kuwana mazano ari muShoko rake anogona kukubatsira kusarudza zvekuita.—VaF. 4:6, 7; Jak. 1:5.
4. Chii chingakubatsira kuti uwedzere kujekerwa nenyaya yemuBhaibheri?
4 (2) Fungidzira. Jehovha akatipa chipo chinoshamisa chekukwanisa kufungidzira. Kuti nyaya yemuBhaibheri yauri kuverenga iwedzere kujeka, edza kufungidzira zviri kuitika uye zvione sekuti ndiwe munhu wacho wauri kuverenga nezvake. Edza kuona zvinhu zvaionekwa nemunhu wacho uye kuva nemanzwiro aangadaro aiva nawo.
5. Kufungisisa kuita sei, uye zvii zvaungaita kuti ukwanise kufungisisa?
5 (3) Fungisisa. Paunenge uchifungisisa unenge uchidzamisa pfungwa pane zvauri kuverenga uchiona kuti zvinoshanda sei muupenyu hwako. Kufungisisa kunokubatsira kubatanidza pfungwa dzakasiyana-siyana uye kunyatsonzwisisa zvauri kuverenga. Kuverenga Bhaibheri usingafungisisi kwakafanana nekuunganidza zvinhu zvekuvakisa wongosiya zvakadaro. Kufungisisa kwakafanana nekushandisa zvinhu zvacho kuti uvake chimwe chinhu. Kuti ukwanise kufungisisa, unogona kuzvibvunza uye kupindura mibvunzo yakaita seiyi: ‘Munhu anonyanya kutaurwa munyaya iyi akaitei kuti agadzirise dambudziko rake? Jehovha akamubatsira sei? Zvandadzidza munyaya iyi zvingandibatsira sei kutsungirira matambudziko?’
6. Nei tichifanira kushandisa zvatinodzidza?
6 (4) Shandisa zvaunodzidza. Jesu akati kana tisingashandisi zvatinodzidza tinenge takafanana nemurume anovakira imba yake pajecha. Anoshanda nesimba asi anenge achishandira pasina. Nei zvakadaro? Nekuti kana mvura yakasimba uye mafashamo zvikarova imba yacho, inowondomoka. (Mat. 7:24-27) Kana isuwo tikanyengetera, tikafungidzira uye tikafungisisa asi torega kushandisa zvatinenge tadzidza, tinenge tashandira pasina. Patinozosangana nemiedzo kana kutambudzwa, kutenda kwedu kunenge kusina kunyatsosimba. Asi patinodzidza toshandisa zvatinodzidza, tinoita zvisarudzo zvakanaka, tinowedzera kuva nerugare, uye kutenda kwedu kunowedzera kusimba. (Isa. 48:17, 18) Tichishandisa zvinhu 4 zvatichangobva kukurukura, ngationei zvatinodzidza pane zvakaitika muupenyu hwaMambo Dhavhidhi.
UNODZIDZEI PANA MAMBO DHAVHIDHI?
7. Inyaya ipi yemuBhaibheri yatava kuda kukurukura?
7 Wakamborwadziswa neshamwari yawaivimba nayo kana kuti nemumwe munhu wemumhuri here? Kana zvakadaro zvakamboitika kwauri, uchabatsirwa nekudzidza nyaya yaAbsaromu, mwanakomana waMambo Dhavhidhi, uyo akarwadzisa baba vake ndokuedza kuvatorera umambo.—2 Sam. 15:5-14, 31; 18:6-14.
8. Ungaitei kuti Jehovha akubatsire?
8 (1) Nyengetera. Uchifunga nezvenyaya yacho, udza Jehovha manzwiro auri kuita nezvekubatwa zvisina kunaka kwawakaitwa. (Pis. 6:6-9) Nyatsotaura manzwiro auri kuita. Chibva wakumbira Jehovha kuti akubatsire kuona mazano aungashandisa paunenge uchiedza kukunda dambudziko racho.
9. Taura zvakaitika munyaya ine chekuita naDhavhidhi naAbsaromu.
9 (2) Fungidzira. Funga zvakaitika munyaya iyi uye fungidzira kuti Mambo Dhavhidhi akanzwa sei. Absaromu mwanakomana waDhavhidhi anoshanda kwemakore achiedza kuita kuti vanhu vamude. (2 Sam. 15:7) Paanoona sekuti nguva yekuita zvaari kuda yakwana, anotuma vasori munyika yese yeIsraeri kuti vaite kuti vanhu vagadzirire kumugamuchira samambo wavo. Anotoitawo kuti shamwari yepedyo yaDhavhidhi uye chipangamazano wake Ahitoferi, abatane naye pakupanduka kwacho. Absaromu anozivisa kuti ava mambo, uye anobva aedza kubata uye kuuraya Dhavhidhi uyo angangodaro ari kurwara zvakanyanya panguva yacho. (Pis. 41:1-9) Dhavhidhi anoziva zviri kurongwa uye anobva atiza achibuda muJerusarema. Pakupedzisira uto raAbsaromu rinorwisana neuto raDhavhidhi. Uto revapanduki rinokundwa, uye Absaromu mwanakomana waDhavhidhi anourayiwa.
10. Mambo Dhavhidhi aigona kunge akaita sei?
10 Chifungidzira kuti Dhavhidhi anofanira kunge ainzwa sei zvinhu zvese izvi pazvaiitika kwaari. Aida Absaromu uye aivimba naAhitoferi. Asi vese vakamurwadzisa chaizvo uye vakatoedza kumuuraya. Dhavhidhi aigona kunge akarega kuvimba nedzimwe shamwari dzake, achifungira kuti naidzowo dzakanga dzabatana naAbsaromu. Aigona kunge akangofunga zvakanakira iye chete oedza kutiza ari ega. Kana kuti aigona kunge akaora mwoyo okanda mapfumo pasi. Asi Dhavhidhi haana kuita zvese izvozvo. Akakunda dambudziko iri rakaoma. Nei akakwanisa kurikunda?
11. Dhavhidhi akaita sei paaiva mumamiriro ezvinhu akaoma?
11 (3) Fungisisa. Zvii zvaunodzidza panyaya yacho? Pindura mubvunzo uyu wekuti, “Zvii zvakaitwa naDhavhidhi zvakamubatsira?” Dhavhidhi haana kuvhunduka ndokumhanya-mhanya kuita zvisarudzo zvisina uchenjeri. Uyewo haana kutya zvekusvika pakutadza kusarudza zvekuita. Asi akanyengetera kuna Jehovha achikumbira kubatsirwa. Akakumbirawo shamwari dzake kuti dzimubatsire uye akakurumidza kuita zvaakanga asarudza. Kunyange zvazvo akarwadziswa chaizvo, Dhavhidhi haana kurega kuvimba nevamwe uye haana kugumbuka. Akaramba achivimba naJehovha uye neshamwari dzake.
12. Zvii zvakaitwa naJehovha kuti abatsire Dhavhidhi?
12 Jehovha akabatsira sei Dhavhidhi? Kana ukatsvakurudza, uchadzidza kuti Jehovha akapa Dhavhidhi simba raaida kuti atsungirire dambudziko iri. (Pis. 3:1-8; mashoko ekusuma) Jehovha akakomborera zvisarudzo zvakaitwa naDhavhidhi. Uye akatsigira shamwari dzakavimbika dzaDhavhidhi padzairwa kuti dzidzivirire mambo.
13. Ungatevedzera sei Dhavhidhi kana mumwe munhu akakurwadzisa chaizvo? (Mateu 18:15-17)
13 (4) Shandisa zvaunodzidza. Zvibvunze kuti, ‘Ndingatevedzera sei Dhavhidhi?’ Kurumidza kugadzirisa dambudziko racho. Zvichienderana nemamiriro ezvinhu, unogona kushandisa zano raJesu rinowanika muna Mateu chitsauko 18. (Verenga Mateu 18:15-17.) Asi haufaniri kukurumidza kuita zvisarudzo zvichibva pamanzwiro aunenge uchiita. Unofanira kunyengetera kuna Jehovha kuti akubatsire kudzikama uye kuziva zvekuita panyaya yacho. Usarega kuvimba neshamwari dzako. Asi bvuma kubatsirwa nadzo. (Zvir. 17:17) Chinonyanya kukosha ndechekuti ushandise mazano aunopiwa naJehovha ari muShoko rake.—Zvir. 3:5, 6.
UNODZIDZEI PANA PAURO?
14. Mamiriro api ezvinhu angaita kuti unyanye kufunga nezva2 Timoti 1:12-16; 4:6-11, 17-22?
14 Uri kupikiswa nevemumhuri here? Unogara munyika inorambidzwa mamwe mabasa evanhu vaJehovha kana kuti inorambidzwa ese here? Kana zvakadaro unogona kukurudzirwa nekuverenga 2 Timoti 1:12-16 uye 4:6-11, 17-22. * Pauro akanyora mavhesi aya paakanga ari mujeri.
15. Chii chaungakumbira Jehovha?
15 (1) Nyengetera. Usati waverenga mavhesi iwayo, udza Jehovha nezvedambudziko rako uye kuti riri kuita kuti unzwe sei. Nyatsotaura manzwiro auri kuita. Chibva wakumbira Jehovha kuti akubatsire kunzwisisa mazano ari munyaya dzinotaura zvakaitika kuna Pauro, ayo achakubatsira kuziva zvekuita nematambudziko auri kusangana nawo.
16. Chii chakaitika kuna Pauro?
16 (2) Fungidzira. Fungidzira uri iwe Pauro. Ari mujeri kuRoma uye akasungwa necheni. Aka hakasi kekutanga kuiswa mujeri, asi panguva ino ane chokwadi chekuti achaurayiwa. Dzimwe shamwari dzake dzamusiya uye haasisina simba.—2 Tim. 1:15.
17. Pauro aigona kunge akaita sei?
17 Pauro aigona kunge akaisa pfungwa pane zvakaitika kare, achifunga kuti dai asina kuva muKristu anoshingaira angadai asina kusungwa. Aigona kunge akagumbukira varume vemunharaunda yeEzhiya avo vakanga vamusiya, uye aigona kunge akarega kuvimba nedzimwe shamwari dzake. Asi Pauro haana kuita zvese izvozvo. Nei aiva nechokwadi chekuti shamwari dzake dzaizoramba dzakavimbika kwaari uye kuti Jehovha aizomupa mubayiro?
18. Pauro akaita sei nedambudziko raakasangana naro?
18 (3) Fungisisa. Pindura mubvunzo wekuti, “Zvii zvakaitwa naPauro zvakamubatsira?” Kunyange paakanga atarisana nerufu, Pauro haana kukanganwa kuti nyaya inokosha ndeyekuita kuti Jehovha akudzwe. Uye akaramba achifunga kuti angakurudzira sei vamwe. Akaratidza kuti aivimba naJehovha nekugara achinyengetera. (2 Tim. 1:3) Pauro haana kuramba achifunga nezvehama dzakanga dzamusiya, asi akaratidza kuti aionga chaizvo kutsigirwa uye kubatsirwa kwaakanga aitwa neshamwari dzake dzakavimbika. Pauro akarambawo achidzidza Shoko raMwari. (2 Tim. 3:16,17; 4:13) Chinonyanya kukosha ndechekuti ainyatsovimba kuti Jehovha naJesu vanomuda. Vakanga vasina kumusiya, uye vaizomupa mubayiro wekushumira kwaakaita akavimbika.
19. Jehovha akabatsira sei Pauro?
19 Jehovha akanga ayambira Pauro kuti aizotambudzirwa kuva muKristu. (Mab. 21:11-13) Akabatsira sei Pauro? Akapindura minyengetero yaPauro, uye akazomupa simba. (2 Tim. 4:17) Pauro akavimbiswa kuti aizowana mubayiro wekushanda nesimba kwaakanga aita. Jehovha akaitawo kuti shamwari dzaPauro dzakavimbika dzimubatsire pane zvaaida.
20. Tichifunga nezvaVaRoma 8:38, 39, tingatevedzera sei Pauro?
20 (4) Shandisa zvaunodzidza. Zvibvunze kuti, ‘Ndingatevedzera sei Pauro?’ Tinofanira kutarisira kutambudzirwa kutenda kwedu sezvakaitwa Pauro. (Mako 10:29, 30) Kuti tirambe takaperera kuna Jehovha patinenge tiri mumatambudziko tinofanira kuramba tichinyengetera kwaari uye tinofanira kugara tichidzidza Shoko rake. Tinofanirawo kugara tichiyeuka kuti chinhu chinonyanya kukosha chatingaita, kuita kuti Jehovha akudzwe. Tinogona kuva nechokwadi chekuti Jehovha haazombotisiyi uye hapana chingaitwa nachero ani zvake chingamutadzisa kuramba achitida.—Verenga VaRoma 8:38, 39; VaH. 13:5, 6.
DZIDZA PANE VAMWE VANHU VANOTAURWA MUBHAIBHERI
21. Chii chakabatsira Aya naHector kuti vakunde matambudziko avaisangana nawo?
21 Pasinei nemamiriro edu ezvinhu, tinogona kusimbiswa nevamwe vanhu vanotaurwa muBhaibheri. Semuenzaniso, imwe hanzvadzi inopayona yekuJapan inonzi Aya inoti nyaya yaJona yakaibatsira kuti isatya kuparidza munzvimbo dzinowanika vanhu vakawanda. Mumwe mukomana wekuIndonesia anonzi Hector uyo ane vabereki vasingashumiri Jehovha anoti muenzaniso waRute unoita kuti ade kudzidza nezvaJehovha uye kumushumira.
22. Ungaitei kuti unyatsobatsirwa nemadhirama emuBhaibheri kana kuti nenyaya dzakanzi “Tevedzera Kutenda Kwavo”?
22 Ungawanepi mienzaniso yemuBhaibheri ichakusimbisa? Mavhidhiyo edu nemadhirama ekuteerera uye nyaya dzakanzi “Tevedzera Kutenda Kwavo” zvinogona kukubatsira kuti uone nyaya dzemuBhaibheri sedziri kutoitika. * Usati waona vhidhiyo, wateerera dhirama kana kuti waverenga nyaya idzi dzakanyatsotsvakurudzwa, kumbira Jehovha kuti akubatsire kuwana pfungwa dzaunogona kushandisa. Fungidzira uri iwe munhu ari kunyanya kutaurwa munyaya yacho. Fungisisa zvakaitwa nevashumiri vaJehovha ava vakatendeka uye kuti akavabatsira sei kukunda matambudziko avo. Chibva washandisa zvidzidzo zvacho muupenyu hwako. Tenda Jehovha nerubatsiro rwaari kutokupa. Uye ratidza kuti unotenda rubatsiro irworwo nekutsvaga mikana yekukurudzira uye kutsigira vamwe.
23. Maererano naIsaya 41:10, 13, Jehovha anovimbisa kuti achatiitirei?
23 Kurarama munyika ino iri kutongwa naSatani kwakaoma, uye dzimwe nguva tinogona kutadza kuziva zvekuita. (2 Tim. 3:1) Asi hatifaniri kuzvidya mwoyo kana kutya. Jehovha anoziva matambudziko atiri kusangana nawo. Patinosangana nematambudziko, anoramba akatibata neruoko rwake rwerudyi rune simba sezvaakavimbisa. (Verenga Isaya 41:10, 13.) Tine chokwadi chekuti Jehovha achatibatsira uye kuti Bhaibheri rinotipa simba ratinoda kuti titsungirire chero dambudziko ratinosangana naro.
Ndezvipi zvinhu 4 zvatinogona kuita patinenge tichidzidza zvingaita kuti tibatsirwe nemienzaniso yemuBhaibheri?
Wadzidzei pamuenzaniso waMambo Dhavhidhi uye wemuapostora Pauro?
Ndiani munhu wemuBhaibheri waungada kudzidza zvakawanda nezvake?
RWIYO 96 Bhuku raMwari—Ipfuma Chaiyo
^ ndima 5 Nyaya dzakawanda dziri muBhaibheri dzinoratidza kuti Jehovha anoda vashumiri vake uye achavabatsira kuti vatsungirire chero matambudziko avanosangana nawo. Nyaya ino inotaura zvaungaita kuti udzidze zvakawanda pakuverenga kwaunoita nyaya dziri muBhaibheri.
^ ndima 2 Nzira yekudzidza iri kutaurwa pano ingori imwe yedzakawanda dziripo. Dzimwe nzira dzekudzidza Bhaibheri dzinowanika muBhuku Rinobatsira Zvapupu zvaJehovha Pakutsvakurudza, pasi pemusoro unoti “Bhaibheri” uye musoro mudiki unoti “Kuverenga Bhaibheri uye Kurinzwisisa.”
^ ndima 14 Musaverenga mavhesi aya pamunenge muchiita Chidzidzo cheNharireyomurindi seungano.
^ ndima 22 Ona chikamu chakanzi “Tevedzera Kutenda Kwavo—Varume Nevakadzi Vanotaurwa muBhaibheri” chiri pajw.org. (Enda pakanzi ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI > KUTENDA MUNA MWARI.)
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvatingaita Kuti Tiwane Simba Kubva muBhaibheri
w21 March pp. 14-19